War-saxaafadeed: Puntland oo soo bandhigtay qorshaheeda hadii Villa Somalia ay ku adkeysato sidan | SMC
Home WARARKA MAANTA War-saxaafadeed: Puntland oo soo bandhigtay qorshaheeda hadii Villa Somalia ay ku adkeysato...
War-saxaafadeed: Puntland oo soo bandhigtay qorshaheeda hadii Villa Somalia ay ku adkeysato sidan
War-saxaafadeed kasoo baxay Puntlad ayaa lagu soo dhoweeyay baaqii guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullahi ee ahaa in la qabto shir wada tashiga oo looga hadlayo hannaanka doorashada ee dalku aadayo.
Sidoo kale Puntland ayaa soo dhaweysay guddiga uu Aqalka Sare u xil saaray qabashada shirkaas, iyadoo qoraalka Puntland lagu soo jeediyay in shirkaas la qabto ugu dambeyn 20 bishan June.
Puntland ayaa sidoo kale qoraalkan ku sheegtay in aysan ka qeyb geli doonin shirkaas hadii uu dhaafo 27-ka bishan June, xilligaas oo loo balansan yahay in Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaran uu warbixin ka jeediyo baarlamaanka hortiisa.
Warkan ka soo baxay maamulka Puntland ayaa ku soo aadaya, Iyadoo Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu war-saxaafadeed ka soo baxay shirkii guddiga joogtada ee golaha Aqalka Sare.
War-saxaafadeedka guddiga joogtada ee Aqalka Sare ayaa lagu sheegay in goluhu uu leeyahay kaalin dastuuri ah, isu keenista madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleedba, si looga arrinsado loogana heshiiyo hannaan lagu meel marinayo xaalada kala guurka ah ee dalka.
Sidoo kale warka guddiga ayaa sheegay in qabashada doorashooyinka ay u baahantahay in wadatashi deg-deg ah ay isugu yimaadaan dhammaan madaxda Qaranka, dowlad goboleedyada iyo saamileyda siyaasadda ka hor 25-ka bishan June.
Hoos ka akhriso war-saxaafadeedka Puntland oo dhameystiran
Previous articleMadaxweyne Lafta Gareen oo kulamo ka wada Magaaladda Xudur